Namarana ny fizahan-tany mahomby amin'ny fizahan-tany sy varotra any amin'ny tanàna telo any Etazonia i Armenia
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Namarana ny fizahan-tany mahomby amin'ny fizahan-tany sy varotra any amin'ny tanàna telo any Etazonia i Armenia
Ny komity fizahan-tany any Armenia, miaraka amin'ireo solontenan'ny sehatra tsy miankina, dia nandray anjara tamin'ny fivoriana sy hetsika nandritra ny herinandro tao amin'ny tanàna telo. Ny eTN dia nifandray tamin'ny Komitim-pizahan-tany any Armenia mba hamela anay hanaisotra ny trano fandoavam-bola amin'ity fanambarana an-gazety ity. Tsy mbola nisy valiny. Noho izany, ataonay ho an'ny mpamaky anay ity lahatsoratra vaovao ity ary manampy rindrambaiko iray izahay. ”
Ny Komitim-pizahan-tany any Armenia, miaraka amin'ireo solontena tsy miankina amin'ny indostrian'ny fizahantany Armeniana, dia nandray anjara tamin'ny fivoriana sy hetsika nandritra ny herinandro tao amin'ny tanàna telo mba hampitomboana ny fahafantarana ny tolotra fizahan-tany ara-kolontsaina ao Armenia. Ny hetsika farany tany Washington DC dia nahitana ny fitsidihana ny Smithsonian Folklife Festival tao amin'ny National Mall, izay mampiseho ny lova ara-kolotsaina Armeniana amin'ity taona ity.
Ny andiana hetsika dia natomboka tany Boston ny Alatsinainy 25 Jona, niaraka tamin'ny fanendrena haino aman-jery momba ny dia sy ny fivorian'ny solontenan'ny mpivarotra dia an-toerana ao amin'ny AGBU. Hripsime Grigoryan, ny filoha vao notendrena ho an'ny Komitim-pizahan-tany any Armenia, dia niarahaba ny vahiny tamin'ny alàlan'ny famelabelaran-kevitra iray, nanomboka ny atrikasa fivarotam-panabeazana sy fotoam-pifaneraserana niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany Armeniana.
Ny talata 26 jona dia nandray anjara tamin'ny hetsika varotra fizahan-tany hafa tao amin'ny foiben'ny AGBU any New York City ny komitin'ny fizahan-tany any Armenia, izay narahin'ny fandraisana haino aman-jery natrehin'ny mpanao gazety mpanao dia lavitra. Ho fanampin'ny topimaso momba ny toerana nalain'i Grigoryan, ireo mpanatrika ny media dia notsaboina tamin'ny famelabelaran-kevitra nataon'ny mpanoratra sy poeta Armeniana nahazo ny loka Pulitzer, Peter Balakian ihany koa. Niresaka momba ny tantara sy kolontsaina marobe an'i Armenia i Balakian, ary koa ny fikatsahany ny hahita ny tanindrazany manan-tantara, Armenia, sy ny fifandraisany amin'ny diaspora Armeniana any Amerika.
Raha tany New York, ny delegasiona My Armenia dia nanao andro fanendrena varotra fitsangatsanganana ihany koa ny Alarobia 27 Jona niaraka tamin'ireo mpandraharaha mpizahatany lehibe.
Avy any New York City, nandeha nankany Washington DC ny fandaharana ny alakamisy 28 jona, ho an'ny fivorian'ny mpivarotra fitsangatsanganana farany ao amin'ny fiangonana Soorp Khatch Armenian Apostolic Church ary fandraisana an-tsokosoko an-kalamanjana ao amin'ny Smithsonian Folklife Festival. Ny fetiben'ny Folklife Smithsonian fanao isan-taona dia novokarin'ny Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage ary novokarina niaraka tamin'ny National Park Service. Ity no fotoana voalohany hanehoana kolontsaina Armeniana betsaka amin'ny Fetibe. Anisan'ny mpanohana ny festival ny AGBU.
Ny hetsika dia nokarakarain'ny My Armenia Program, programa fizahan-tany lova ara-kolontsaina vatsian'ny US Agency for International Development (USAID) ary notontosain'ny Smithsonian Institution, ary nampiantranoin'ny Union Armeniana Jeneraly Benevolent (AGBU), fikambanana kolontsaina Armeniana manana foibe any New York City.
"Ny fampiantranoana an'ity andiana hetsika ity dia mifanaraka amin'ny tanjonay hampianarana ny zava-drehetra momba ny kolontsaina sy ny tantara Armeniana,", "hoy i Natalie Gabrelian, talen'ny fanabeazana Alternative AGBU. "Ny famporisihana ny fahalianan'ny indostrian'ny fizahantany ho any Armenia sy izay rehetra atolotra an'izao tontolo izao dia lakilen'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny fametrahana azy amin'ny sarintany ho an'ny mpandeha."
"Iraka tena lehibe io fanentanana io ho fampahafantarana an'i Armenia amin'ny maha toerana fizahan-tany azy," hoy i Grigoryan, Filohan'ny Komitim-pizahan-tany any Armenia. "Tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny My Armenia Program sy ny Smithsonian Folklife Festival, voninahitra lehibe ny nanararaotra nizara bebe kokoa ny hafatray tamin'ny mpanjifa amerikana ary nanentana ny mpandeha tany Amerika Avaratra hitsidika ny toerana misy antsika any amin'ny kolontsaina mampino."
Nandefa sidina ho any Delhi, India ny Korean Air
Mpizahatany Silamo mitondra fiara mankany Jerosalema Atsinanana